Manchester City oo iska lumisay fursad weyn ay ku heli kartay saxiixa Luka Modric” – Gool FM
Manchester City oo iska lumisay fursad weyn ay ku heli kartay saxiixa Luka Modric”
(Manchester) 06 Sebt 2018. Waxaa jira warar ku aadan in kooxda Manchester City ay fursad weyn ku heshay inay gacanta ku dhigto saxiixa laacibka kooxda Real Madrid Luka Modric kahor mudo laga joogo 11 sano.
Luka Modric ayaa yimid sanadii 2008 horyaalka dalka England gaar ahaan kooxda Tottenham Hotspur, wuxuuna ku sugnaa mudo dhan 4 sano, kahor inta uusan ku biirin Real Madrid sanadii 2012.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” Xoghaayihii hore kooxda reer Manchester City Bernard Halford ayaa sheegay inay ku dhawaadeen lasoo saxiixashada Luka Modric sanadii 2007 xiligaas oo ay da’adiisu ahayd 22 jir.
“Matka uu milkiyada kooxda Manchester City gacanta ku hayay Thaksin Shinawatra, waxaan heesanay fursad aan kula soo saxiixan karnay Luka Modric”
“Wuxuu ii sheegay xiligaas inaan ku dhawnahay sameynta saxiix weyn ee ah mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan aduunka”.
“Waxaan kula talinay Luka Modric inuu yimaado kooxda Manchester City, marka aan u baahanay lacag si loo xiro heshiiska, waxaa lacagaha Thaksin Shinawatra lagu xanibay dalka Thailand”.
“Wuxuu ii yimid maalinka ugu horeeyay ee xili ciyaareedka wuxuuna ii sheegay inay muhiim tahay in uu iska casilo shaqada, sidaas darteed ma aanan helin saxiixa Luka Modric, heshiiska wuxuu ku dhawaa in lagu soo xidho 10 Million”.